ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ၁၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့
May you beahappy long life you've wanted!!
happy birthday ပါ လင်းလက် :)
7) မေဓာဝီ: မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ... ညီမလေး အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး ချစ်တဲ့သူများနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေ ..
8) s0wha1: ညီမလေး...ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ...
9) AD: ပျော်ရွှင်သော....မွေးနေ့မြတ် ပါ...ဟုဆိုချင်..၏..
10) FreeBurma-FreeBurma: Happy Birthday ညီမလေး လင်းလက်ကြယ်စင် .... နောက်လာမည့်မွေးနေ့မှာ ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်မှုကြီးနဲ့ အတူပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ .....
14) BBM: Happy birthday ပါ မလင်းလက်ကြယ်စင်...... ထာဝရပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ...
21) Aung: Happy Birthday Linlet........
23) kyaw zin tun: happy birthday!! 2day also my birthday...
Teen age ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဒီမွေးနေ့လေးဟာ ပျော်ရွှင်မှု အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသော မမေ့နိုင်စရာ အမှတ် တရနေ့ကလေးတနေ့ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...။
27) လူမော်: မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ...။
32) ကိုဇင်: Happy Birthday ပါ ညီမလေး လင်းလက်ရေ...
အောင်သူ: ညီမလေးလင်းလက် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
34) john: Hi little linlet Happy Birthday to you.wished for you all the best for you life's time.
happy birthday, nyi ma....
မင်္ဂလာပါ လင်းရေ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူများနဲ့ အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ပါစေနော်။ ကျန်မာရွှင်လန်းပြီး နိုင်ငံ့အကျိုးကို သည့်ထက်မက သယ်ပိုးနိုင်သောသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ...